ဗီဒီယို - သွေးဆောင်မှုသိပ္ပံ Martech Zone
မကြာသေးခင်ကငါတို့တင်လိုက်သောလူကြိုက်များသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြခဲ့သည် Vis ည့်သည်များကိုစိတ်ပညာဖြင့်ပြောင်းလဲရန်နည်းလမ်း ၁၀။ လူတစ် ဦး အား ၀ ယ်ရန်မည်သည့်အရာကဖြစ်စေသည်ကိုနားလည်ခြင်းသည်စျေးကွက်သမားတစ် ဦး အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးနိုင်လျှင်ဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်သင်သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။
၏စာရေးဆရာများအနေဖြင့်ဤဗီဒီယို infographic ဟုတ်ကဲ့!: ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြနည်းလမ်းများ ၀ ယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်အရာကိုထိုးထွင်းသိမြင်သည်။ ဗွီဒီယိုတွင်ဖော်ပြထားသော Universal Shortcuts များသည် အပြန်အလှန်အကျိုးပြု, ရှားပါးမှု, အာဏာ, ကိုက်ညီမှု, like နှိပ် နှင့် သဘောတူ.
Tags: အာဏာသဘောတူညီမှုကိုက်ညီမှုဒေါက်တာရောဘတ် Cialdinilike နှိပ်သှေးဆောငျခွငျးအပြန်အလှန်အကျိုးပြုရှားပါးမှုသှေးဆောငျ၏သိပ္ပံစတိဗ်မာတင်
အဆိုပြုထားသောဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်